Boky masina – Any Korea no atonta ny Baiboly malagasy - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Boky masina – Any Korea no atonta ny Baiboly malagasy
Lafo ny eto an-toerana. Tsy maintsy manafatra Baiboly avy any ivelany, any Korea ny sampan-draharaha mamokatra sy mampiely baiboly mikasika ny fanon- tana ireo Baiboly malagasy. «Tsy manara-penitra ny taratasy eto an-toerana izay saika efa niasa avokoa ary lafo ihany koa ny masonkarena fanontana boky», hoy ny fanazavan’Andriamoria Hoby, tompon’ andraikitra ao amin’ny sampan-draharaha famoka- rana sy fampielezana Baiboly.
Ny ao Korea no voalaza ho mora indrindra ka anon- tana ireo Baiboly lehibe. Ny kely kosa no atao eto an-toerana.
Lasa tsy maharaka vokatr’ izany ny tolotra ny tinady Baiboly eto amintsika satria voatery miandry izay boky voatonta avy any ivelany ireo mpitady Baiboly. Ireo fiango- nana kosa no manohana eo amin’izay fanafarana Baiboly izay. Vola amerikanina mantsy no andoavana ny vidin’ny fanontana ny Baiboly, ka be ny fatiantoka aterak’ izany.
Eo amin’ny telo volana eo no fe-potoana ilaina aha- tongavan’ny Baiboly hafarana avy any Korea mankaty Madagasikara. Iray volana ny fanontana azy ary roa volana kosa ny fitaterana azy an-tsambo. Manodidina ny 60 000 ka hatramin’ny 80 000 isan-taona eo ny Baiboly afarana avy any Korea mankaty amintsika.
Nanomboka omaly ary hitohy hatramin’ny zoma ho avy izao eny amin’ny zaridainan’Antaninarenina ny foaran’ny boky, izay kara- karain’ny sampan-draha- raha Mpampiely Baiboly sy ireo trano mpanonta sy mpivaro-boky eto Madaga- sikara ho fampirisihana ny Malagasy hamaky boky. Misy ny fihenam-bidy atao amin’ny vidin’ny boky amidy eny an-toerana mandritra io hetsika io.
FILATSAHANA AN-TSITRAPO-Malagasy 223 169 miasa maimaim-poana Natolotra nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny filatsahana an-tsitrapo, tetsy amin’ny Ivon-toeran’ny fampianarana momba ny politika (Iep) Ankadivato, ny ampahan’ny tatitra mahaka-sika ny filatsahana an-tsitrapo eto Madagasikara. Ny Ivon-toeram-pirenen’ny haierana malagasy (Instat) no nisahana izany. Tsikaritra tamin’izany ny fitombon’ireo mpilatsaka an-tsitrapo. 163 687 tamin’ny taona 2012. Mahatratra hatramin’ny 223 169 kosa ny enim-bolana voalohan’ ny taona 2013. 34,5%-n’ireo mpilatsaka an-tsitrapo no tsy manana asa hafa mihitsy. Mahatsiaro ho voailikilika raha samy mpilatsaka an-tsitrapo izy ireo. «Hamaivanintsika samy Malagasy ny asanay mpilatsaka an-tsitrapo. Ireo vahiny anefa omen-danja tokoa», hoy Raharimalala Gertrude, mpilatsaka an-tsitrapo eo anivon’ny Aid et Action. Vontoatin-kevitry ny fankalazana ny fanomezan-danja ny asan’ny mpilatsaka an-tsitrapo. Mitarika indrindra ny fandrosoana eny ifotony mantsy ny asan’ izy ireny. Mangataka indrindra ny fametrahana amin’ ny fomba ofisialy ny filatsahana an-tsitrapo noho izany, ireo mpanao asa fanasoavana, mba ho fantatra sy ankatoavina eo anivon’ny fiaraha-monina. M.R.
Tapatapany AMBOARA > Voahosotra ho tambajotrana orinasa mendrika tamin’ity taona 2013 ity, aty Afrika sy ny Ranomasimbe Indianina indray ny Ogilvy&Mather, izay manamarika ny 10 taona nijoroany ankehitriny. Tato anatin’ny dimy taona nisesy no nahazoany io amboara io. Tany Johannesburg -Afrika Atsimo, ny 29 novambra teo, nandritra ilay lanonana «Financial Mail Ad Focus Awards» no nandraisan’izy ireo ny amboara. Ny gazety Boky Financial Mail no nanome io amboara io. FANADIOVANA > Raikitra nanomboka ny alakamisy alina teo asa ny fanesorana ireo fako misavovona eto Antananarivo sy ny mano-didina. Fanamby napetraky ny lefitry ny filohan’ny delegasiona manokana mitan-tana ny tanànan’Antananarivo rahateo, fa manomboka anio zoma dia tsy hisy intsony ny fako miparitaka eto an-drenivohitra. Omaly alina ihany dia ny faritra Ankadivato, Rasalama, Mahazo no niasan’ireo fiara be mpanala fako.
MPAMPIANATRA FRAM-Tsy hisy fetran-taona ny fandraisana ho mpiasam-panjakana Nolanian’ny teo anivon’ny Filankevitra ambonin’ny tetezamita (Cst), ny 3 desambra lasa teo, ny volavolan-dalàna tsy hamerana ny taona ambony indrindra handra-isana ireo mpampianatra karamain’ny Fikambanan’ ny ray aman-drenin’ny mpianatra ho mpiasam-panjakana (Fram). «18 taona ny fetra ambany, tsy ho voafetra kosa ny fetran-taona ambony indrindra, handraisana ny mpampi-anatra Fram ho mpiasam-panjakana», araka ilay volavolan-dalàna. Nomarihin’ny avy amin’ ny Sendikan’ny mpampianatra mpanabe eto Mada-gasikara (Sempama) fa maro ny efa manakaiky na mihoatra mihitsy ny 45 taona, sady efa nahavita 10 taona farafahakeliny teo anivon’ny fampianarana. Natao indrindra hano-mezana fahafaham-po ireo mpampianantra Fram ireo, noho izany ity volavolan-dalàna ity. Voamarika tao anatin’ ny volavolan-dalàna ihany koa, ho an’ireo sokajy voalaza ireo ihany, fa telo taona aorian’ny ivoahan’ ity lalàna ity dia tsy maintsy raisina ho mpiasam-panjakana izy ireo. M.R
FANADIOVANA LAKAN-DRANO-Hahazo famatsiam-bola 4 300 tapitrisa ariary ny kaominina Antananarivo Hiroso amin’ny fanadiovana ireo lakan-drano ny eo anivon’ny kaominina Antananarivo renivohitra (Cua). Hahazo famatsiam-bola avy amin’ny Vondrona Eoropeanina mitentina Ar 4 300 tapitrisa mantsy ny eo anivon’ny Cua. «Ny fahefana misahana ny fisorohana ny tondra-drano (Apipa) sy ny sampandraharaha mahaleo tena misahana ny fitantanana ny tanànan’Antananarivo renivohitra (Samva) no hisahana ny asa. Ny Ar 3 000 tapitrisa dia hatolotra ho an’ny Apipa. Ny Ar 1 300 kosa dia hatolotra ho an’ny Samva», hoy Rasamimanana Olga, lefitry ny filohan’ny delegasionin’ny fitantanana ny Cua. Ho fitsinjovana ny maha olona no naneken’ny Vondrona Eoropeanina hamatsy vola ny fanadiovana ny lakan-drano, raha ny nambaran-dRasamimanana Olga . «Tondraka ny eny amin’ny toerana iva rehetra. Hoentina hiasa mba tsy hahadifitry ny ranon’orana sy ny rano maloto ny faritra iva io famatsiana io. Eo ihany koa ny fijerena ny ahafahan’ireo tanimbary mahazo rano, satria dia tsy tafiditra ny rano amin’ireo Tatara manondraka eny an-tanimbary», hoy izy. Hisy ny asa tana-maro (Himo) hanafainganana ny asa, ka ho andro aman’alina ny asa. Mandritra ny telo na efa-bolana kosa ny faharetany. Ny zoma 13 desambra ho avy izao no hanombohan’ ny asa amin’ny fomba ofisialy, ka hanainga etsy amin’ny Lapan’ny tànana Analakely izany. M.R
RAHARAHA “VOLA AR 16 000 TAPITRISA”-Nanao fanoherana ilay didim-pitsarana ny minisiteran’ny Harena an-kibon’ny tany Miandry ny didim- pitsarana mika-sika ny fano-herana ilay didim-pitsa-rana, saika namoahana vola mitentina Ar 16 000 tapitrisa, tao amin’ny Biraon’ny Kadasitry ny harena an-kibon’ny tany eto Madagasikara (Bcmm), ny minisiteran’ny Harena an-kibon’ny tany. «Taorian’ny nanateran’ ny vadintany io didim-pitsarana io tany amin’ny Bcmm dia efa nanao fanoherana teny amin’ny Fitsarana ny minisitera noho ny tsy maha ara-dalàna izany», hoy Randriafeno Daniella, minisitry ny Harena an-kibon’ny tany raha azo an-tariby omaly. Hidina eny amin’ny Fitsarana Nihazakazaka be ny toe-draharaha mahakasika ity volabe ity satria nisy mpiasan’ny minisiteran’ny Harena an-kibon’ny tany natolotra ny Fampanoavana afak’omaly noho ny fiahiana azy ireo ho niray tsikombakomba tamin’ny fikasana hamoaka izany. Naiditra am-ponja vonjimaika tamin’izany ny talen’ ny Harena an-kibon’ny tany, ny talen’ny Bcmm teo aloha sy ny mpitana ny bokim-bolan’ny Bcmm. «Nanakana ny famoahana io vola io no nataon’ ireo olona ireo. Ny talen’ ny Harena an-kibon’ny tany no niantso ireo zandary rehefa tonga tao amin’ny Bcmm ireo roa lahy saika hampanatanteraka ny didy. Izy ireo indray anefa no nigadra», hoy Rasoa-narivo Gérard, nisolo tena ireo mpiasan’ny minisiteran’ny Harena an-kibon’ny tany omaly, raha niaro ireo mpiara-miasa amin’izy ireo naiditra am-ponja. Milaza ny hidina eny amin’ny Fitsarana ireo mpia- san’ny minisitera anio, hitaky ny famoahana am-ponja ireo mpiara-miasa amin’izy ireo. Mpitantana orinasa iray mpanondrana vokatra amin’ ny harena an-kibon’ny tany, voatonona ao anatin’ ity didim-pitsarana ity, no voalaza fa mitaky ny trosany Ar 16 000 tapitrisa amin’ny Bcmm. Nambaran’ny solontenan’io orinasa io anefa omaly fa tsy misy velively ary tsy manana izany trosa amin’ny Bcmm izany izy ireo. Tsy nanaiky hotononina anarana anefa izy ireo noho ny tahotry ny mety ho haavo lentan’ity fikasana hamoaka volabe ity. Ny Tahirim-bolam-panjakana kosa dia milaza fa «mametraka ny raharaha amin’ny fahendren’ny Fitsarana ary miandry am-pitoniana ny valim-pitsarana ». Hanitry Ny Aina
Baiboly, Mpanoratra Rijakely, 24.04.2012, 08:41	FIARAHAMONINA